अर्जेन्टिनामा पहिलो सौर्य शक्तिको लागि सडक बत्ती | हरियो नवीकरणीय
अर्जेन्टिनामा पहिलो सौर्य सञ्चालित सडक बत्ती
पहिलो सडक प्रकाश मा आधारित अर्जेन्टिना सौर ऊर्जा.
यो प्रणाली स्थापित भएको शहर शहर साल्टा प्रान्तको जनरल मोस्कोनीको नगरपालिकामा छ। यी वरपरका मानिसहरू प्राय: बसोबास गर्छन् आदिवासी विचि जातीय समूहको। यस क्षेत्रमा विभिन्न शहरी पूर्वाधारको कमी छ, त्यसैले यो यो परियोजना को लागी चुनिएका मध्ये एक थियो।
El प्रकाशको लागि स्वायत्त फोटोवोल्टिक प्रणाली सडकहरु को एक ऊर्जा स्रोत को स्रोत को रूप मा उपयोग गरी सौर्य विकिरण यो धेरै सरल र कायम गर्न सजिलो छ।
A सौर प्यानल, एक ब्याट्री र चार्ज नियंत्रक लाई नियमन गर्न ऊर्जा संचित। यो प्रणाली स्वतन्त्र र स्वायत्त छ त्यसैले यो रातमा मात्र चालु हुन्छ र प्रकाश उडान सुरु हुँदा बन्द हुन्छ।
यस सार्वजनिक बत्तीहरू वरपरका आदिवासी समुदायसँग सहमत भएका स्थानहरूमा स्थापित गरिएको थियो जसले विद्यालयहरू, धार्मिक मन्दिरहरू र त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई मनपर्ने स्थानहरूलाई प्राथमिकता दिएका थिए।
यो सरल उपायको साथ, यस शहरका जनताको जीवनमा उल्लेखनीय सुधार हुनेछ।
यो परियोजना नगरपालिका द्वारा विकसित गरिएको थियो, नागरिकहरु द्वारा समर्थित, र राष्ट्रिय सरकारबाट कोष प्राप्त।
यस किसिमको पहल धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि गरीब शहरहरूमा बढी सेवाहरू प्रदान गर्नाले जनताको जीवनस्तर सुधार र अझ बढी प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ ऊर्जा आत्मनिर्भरता.
महत्वपूर्ण गरीबी दर भएका नगरपालिकाहरूमा, दीर्घकालीन आर्थिक तर टिकाऊ विकल्पहरू खोज्नु महत्त्वपूर्ण छ, यही कारण यो पर्यावरण र आर्थिक दृष्टिले दिगो सार्वजनिक नीति हो।
को अक्षय ऊर्जा तिनीहरू साना सहरहरू वा विपन्न सहरहरूमा सुधारहरू प्राप्त गर्न उत्कृष्ट विकल्प हो। त्यसकारण यसलाई अर्जेन्टिनामा स्थानीय राज्यहरूले बढी प्रयोग गर्नुपर्दछ किनभने यस देशमा यस प्रविधि अझै धेरै अविकसित छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » नवीकरणीय ऊर्जा » फोटोभोल्टिक सौर ऊर्जा » अर्जेन्टिनामा पहिलो सौर्य सञ्चालित सडक बत्ती
मँ जान्न इच्छुक छु कि त्यस्तो कम्पनी को हो जसले त्यस्तो स्थापना गरेको थियो, किनकि मसँग सोर कम्पनी छ कि सौर्य सार्वजनिक प्रकाशको लागि समर्पित छ, जुन धेरै राम्रो प्रदर्शनको साथ राजमार्ग र सडकहरू रोशन गर्न प्रयोग भइरहेको छ।
मानुएल फेना गोन्जालेज प्लेसहोल्डर छवि भन्यो
नमस्ते क्रिस्टियन, कस्तो छ? म यहाँ असुविधाको लागि माफी चाहन्छु यहाँ सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट कोलम्बियामा सौर्य सार्वजनिक प्रकाशको लागि मैले पहिले कहिल्यै देखेको छैन, इमान्दारीसाथ म तपाईंलाई सोध्छु उनीहरू कत्तिको कुशल छन्, के ती सम्पूर्ण रात बिताउँछन्? वा यो बिहान हुनुभन्दा अघि बाहिर जान्छ! तपाइँ कसरी तपाइँको ग्राहकलाई आश्वस्त गर्नुहुन्छ कि मौसम फरक भए पनि, सार्वजनिक प्रकाश प्रत्येक रातमा चालु हुन्छ? धन्यबाद
म्यानुएल फेर्ना गोन्जालेजलाई जवाफ दिनुहोस्
शुभ प्रभात, मेरो छिमेकमा व्यापार छ, र म यसलाई स्वायत्त सार्वजनिक प्रकाशको नेतृत्वको साथ प्रदान गर्न चाहान्छु।
म सुविधाहरू, स्वायत्तता र लागतहरू जान्न चाहान्छु?
मलाई चाहिने यी सुविधाहरू सहित सार्वजनिक बत्तीहरू हुन्।
Horacio लाई जवाफ दिनुहोस्।
छापिएका पुस्तकहरूको उत्पादनले वातावरणलाई प्रदूषित गर्दछ
१० उपन्यास शान्ति पुरस्कारले विश्व नेताहरूलाई आणविक उर्जा त्याग्न आग्रह गर्दछ